Iyo Nhema Swan uye Peanut Butter uye Jelly Sandwiches | Martech Zone
Iyo Nhema Swan uye Peanut Butter uye Jelly Sandwiches
Svondo, Zvita 2, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura ndakashandisa sevhisi kuita ongororo yeblog yangu kuti ndione kuti ndeipi nhanho yekuverenga yakanyorwa pairi. Ini ndakamboshamiswa kuti saiti iri padanho reChikoro cheJunior High. Semunhu anofarira kuverenga uye blogger, ndinofanira kunge ndichiita zvirinani kupfuura Junior High Chikoro, handiti? Kuipa imwe pfungwa, handina chokwadi chekuti ndine chero chinhu chandinonyara pamusoro pacho.
Nzira Yokugadzira Peanut Butter uye Jelly Sandwich
Mumwe wevapurofesa vandinoda veChirungu akavhura kirasi yedu kamwe chete nebasa rekunyora, Nzira yekugadzira Peanut Butter uye Jelly Sandwich. Isu takave nemaminitsi makumi matatu akanaka ekunyora iwo mirairo, uye zuva rakatevera, akatishamisa nekuunza chirongo chepeanut butter, jelly, chingwa, nebanga rebhata.
Purofesa wedu akanaka akabva atanga kuteedzera rairo uye kugadzira masangweji. Chigadzirwa chekupedzisira chaive nenjodzi nemafambiro mapfupi sekunge neanonyanya kutsanangura. Pamwe ainyadzisa ndevaya vasina kumbobvira vataura kushandisa banga zvachose. Yakanga iri yekutanga kirasi yechirungu yandakange ndatora iyo yandakabuda nemudumbu kurwadziwa nekuseka zvakanyanya. Pfungwa yechidzidzo yakanamatira kwandiri, zvakadaro.
Mitsara mipfupi, rondedzero yakapfupika, mazwi akapusa uye zvinyorwa zvipfupi zvinogona kukusvitsa padanho reJunior High Chikoro Kuverenga, asi zvakare inovhura yako blog (kana bhuku) kusvika kune vateereri vakawandisa vanonzwisisa ruzivo. Ini ndinofungidzira dai ndaive nechinangwa chekuverenga mwero pane yangu blog, it zvingadaro junior chikoro chepamusoro! Kana ndikakwanisa kutsanangura tekinoroji yandinoshanda nayo kune mumwe munhu ane makore gumi nemashanu, saka mumwe munhu ane makumi mana anogona kunyatsozvigaya!
Iyo Nhema Swan naNassim Nicholas Taleb
Ndiwo mafungiro aya andino vhura bhuku senge Nhema Swan uye haugone kupfuura nemapeji ekutanga makumi mashanu mumwedzi wekuverenga. Semumwe Amazon inotsoropodza chiisei;
[Kunze kwezvitsauko 15 kusvika ku17]… rasara rebhuku racho rinoodza mwoyo. Mazana emapeji anogona kupfupikiswa nekungotaura kuti hatigone kufanotaura zviitiko zvisingawanzoitika.
Wee! Ndatenda kunaka handisi ndoga! Iri bhuku rairwadza. Hazvishamise kuti nei vanhu vachikoshesa mablogiki zvakanyanya mazuva ano. Handisi kuedza kunyora New York Times bestseller uye ini handisi kuyedza kufadza weIvy-leaguer. Ndiri kungoedza kutsanangura izvi zvakapusa nepandinogona kuti ndikwanise kuzvigovana uye iwe ugone kuzvinzwisisa.
Mazwi andingashandise kutsanangura Iyo Nhema Swan: bombastic, chatty, diffuse, discursive, flatulent, gabby, garrulous, inflated, refu, refu-ine mhepo, ine mutsindo, inokatyamadza, pleonastic, prolix, kubhejera, redundant, rhetorical, inonetesa, turgid, verbose, voluble, mhepo. (Ndatenda Thesaurus.com)
Dai Taleb akange anyora Nzira yekugadzira Peanut Butter uye Jelly Sandwich, purofesa wangu anogona kunge achiri kushanda pairi - uye zviri kukahadzika kuti ingangofanana nesangweji zvachose.
Izvo zvakati, ini ndichadzoka uye ndichitora zano remuongorori uye kuverenga Zvitsauko 15 kusvika 17. Uye pamwe yakanaka nzungu ruomba uye jelly sangweji iri kurongeka! Kana iri yekuwongorora chikamu, usanyanye kutarisisa ... ndima imwe yakaiswa kubva kuTsaurus inogona kukurovera notch. 😉
Tags: bhuku rekushambadziranassim talebhove nhema
Blogger Ropa Mapota seSEO Manyepo Anopararira
Kunzwisisa Nei uye Pakati Pakati…
Dec 3, 2007 pa 8: 24 AM
Chaizvoizvo, maererano nenyanzvi dzekunyora, kuita “zviri nani” kunenge kuri kunyora pagiredhi rakatoderera. Avhareji yedanho rekuverenga munyika ino igiredhi rechitanhatu, uye mapepanhau ese anonyorwa pamwero iwoyo. Vanyori Vakanaka Kushambadzira Kukurukurirana vachanyorawo padanho iri, kwete padanho repamusoro. Zvinoita kuti kopi yavo ive nyore kuverenga nekunzwisisa, saka inocheka nepakati pese kuzara kwehupenyu hwedu, uye nekudaro, inogona kunyengetedza. (Havatauriwo kuti “uye saizvozvo.”)
Ndanga ndichiverengawo Black Swan, uye ZVINONYADZA. Ndinoshuva kuti dai wakatumira iyi blog zvitsauko zvishanu zvapfuura uye wandiponesa kubva mukutambudzwa uku.
Dec 3, 2007 pa 9: 50 AM
Ropafadza iwe, Doug, uye mutauri wako pane zvaunotora paThe Black Swan. Zvinoita zvakafanana pandiri secoupla Seconals–10 maminetsi nebhuku uye ndaenda. Nezuro manheru ndakarara na8:45!
Mukomana wako Nassim ndiye wandinoti SAKIA-smart dhongi ziva-zvese. Anopindiranawo netsanangudzo yangu yekushanda ye highbrow-uyo ane dzidzo inodarika kungwara kwake. Mumwe munhu anofanirwa kurova iyi punk ine smarmy-kusiya madhora zana ematipi emakabhi.
Semunhu ari kupora econ, taimbove nezita reBlack Swans. Isu takavadaidza kuti "zviitiko zvekunze", uye ivo vaigara vachikanganisa dzidziso dzedu dzese dzakachena dzekufungidzira. Econ majors ane nzwisiso yakawanda yezvinhu izvi-zviitiko zvisingafungidzike hazvifungidzike.
Dec 3, 2007 pa 9: 51 AM
Sezvakataurwa naDerek nezveMapepanhau nezvimwe, ndakaverenga kumwe (akakurumbira mazwi ekurudyi:) kuti NGUVA inotora chikamu chekuverenga chegiredhi 6-7 pakunyora nyaya dzavo kuti zvive nyore kuti vanhu vese vaverenge.
Zvimwe zvezvakanakisa zvinyorwa zvandakaverenga pamabloggi akasiyana zvirevo zvipfupi zvine zvazvinoreva, ndinofunga Seth Godin ndiye tenzi weizvi.
Dec 4, 2007 pa 4: 59 AM
Ndakawanawo "Junior High".
Ndinoziva sei kana saiti iri kushanda? Pane bhurogu rinozivikanwa nekunetseka kuverenga here?
Dec 12, 2007 pa 1: 46 AM
Ndofunga Nhema Swan inogona kunge yakakodzera kune vatengesi nekuda kwekunzwisisa kwayo njodzi yechokwadi yatakatarisana nayo mumusika wanhasi. Mubhuku rino, iwe uchadzidza zvakawanda pamusoro pesimba nekutonga kupfuura chero kupi zvako. Simba uye kutonga zvinowana kurova kwakashata - shure kwezvose, vatengesi vari kugutsa vanhu mazuva ese uye aya maitiro maviri akanaka ekunyengetedza? Ndofungidzira.
Haisi nyore kuverenga asi ingakurudzira izvi kune vanoita sarudzo dzemarudzi ese.